Ndeapi mapombi emvura ezuva uye ndeapi | | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Renewable simba, Nyowani matekinoroji
Mumakore achangopfuura, matekinoroji matsva ekupomba mvura kubva pasimba rinowedzerwazve ave kubuda. Mune ino kesi, inozvarwa pombi yemvura yezuva seimwe yekushandisa kwesimba rezuva.
Solar pombi dzemvura dzinoshandiswa kupomba mvura mune yakadzika masisitimu, mukumanikidza kwemvura, mumatangi, nezvimwe. Ivo anoshandiswa kupomba mvura nemutengo wakaderera uye neunyanzvi hwakakwana. Iwe unoda kuziva zvakanakira nekuipira mapombi aya uye kuziva kuti ndeipi yaunoda zvinoenderana nezvaunoda?
1 Chii chinonzi pombi yemvura yezuva uye ndeyei?
2 Kubatsira uye kusagadzikana
3 Mhando dzepombi yemvura yezuva
4 Ndeipi pombi yandinoshandisa kana ndikadiridza zvirimwa zvemadiridziro?
Chii chinonzi pombi yemvura yezuva uye ndeyei?
Pombi yemvura yezuva mudziyo unokwanisa kupomba yakanangana nemvura iripo uye Inoshanda kuburikidza nesimba rezuva. Kune mhando dzinoverengeka dzemapombi ezuva, pakati padzo iro rezuva photovoltaic, pombi yemvura inopisa yezuva uye pombi yemvura inopisa yemumba inomira.
Idzi pombi dzemvura dzinonyudza uye dzinofambiswa nesimba rinobva kuzuva. Ivo vanoshanda nenzira yakafanana kune mamwe echinyakare mapombi emvura, kunze kwekuti simba ravo sosi rinogona kudzoreredzwa. Dzinoshandiswa kudiridzira muminda yekurima, kune vanhu vanoda kupomba mvura kubva mutsime kuti vaiburitse, kune izvo zvipatara zvinoda kutumira mvura inopisa kumashawa, nezvimwe. Zvese izvi nekunakirwa nemutengo waro wakaderera, nekuti inofambiswa nesimba rinobva kuzuva.
Kufanana nemidziyo yese inoshanda nesimba rinowedzerwazve, pombi yemvura yezuva ine zvimwe zvakanaka nezvayakaipira kana ichienzaniswa neyechinyakare.
Pakati pezvakanaka zvatinowana:
Iwo ari 100% akachena uye ecological, saka havasiye chero rudzi rwemasara kana kusvibisa.
Isimba risingaperisezvo inouya kubva kune inowanikwazve simba sosi.
Inopa mukana wekupomba munzvimbo dziri dzoga dzisina kana network yemagetsi kana munzvimbo dzinonetsa kuzadza matangi edhiziri.
Iine maitiro akawanda mairi anoshanda zvakanaka. Semuenzaniso, inoshandiswa kuburitsa mvura kubva mutsime reimba, kukwidza mvura yekudiridza yezvirimwa, kudiridza, kudhonza mvura yakasviba kubva kumatangi kana matangi esipi, madziva ekushambira, mvura kubva mumatangi, nezvimwe.
Kuderera kwacho kuri pachena. Kufanana nemidziyo yese ine simba rezuva, kugona kwavo uye mashandiro avo akaganhurirwa kune simba ravanogona kutora kubva kuzuva. Mazuva ane makore, husiku, nezvimwewo. Izvo hazvikanganise kana uchishandisa iyi pombi. Nekudaro, kana mamiriro ezuva nemwaranzi akakodzera, iyi pombi inogona kuve nekuita kukuru uye nekugona.
Mhando dzepombi yemvura yezuva
Kune mhando dzinoverengeka dzepombi yemvura yezuva uye isu tinofanirwa kuziva kuti ndeipi yatinofanira kutenga, zvinoenderana nezvatichaida.
Kune pombi dzinonyudza uye dzepamusoro. Aya mapombi maviri anosiyana mune mamwe maitiro anoita kuti vashande imwe mhando yebasa kwete iyo imwe.
Kune rimwe divi, submersible rezuva mvura pombi inofanira kuiswa pasi pevhu. Inoshandiswa kunyanya kutora mvura kubva kunzvimbo yakadzika, senge tsime, dziva kana tangi. Zvichienderana neuwandu hwemvura iwe yaunoda kutora uye nekudzika pane iyo mvura, pane akati wandei marudzi emasimba epombi iyi.
Kune rimwe divi, iwe uchawana pombi yepamusoro iyo, sekureva kwezita, inoshanda pamusoro. Inonyanya kushandiswa kuwedzera kumanikidza kwemvura uko kupi kwacho kusingasvike zvakanaka. Semuenzaniso, mudzimwe dzimba dziri dzoga, mhando yepombi iyi inoshandiswa kuwedzera kukwira kwemvura. Ivo anoshandiswawo kunyanya kudiridza kunyorera.
Paunenge uchida kugadzirisa kudiridza uye kuwedzera kushanda kwayo, pombi dzemvura dzezuva dzinoshandiswa. Aya anoshandiswa kudiridza kwekudonhedza minda yemichero uye mapindu, kudiridza kwakarongwa uye kana uchiedza kuwedzera kuyerera kwazvinoita nemvura. Mune ese aya mamiriro ezvinhu, mapombi echinyakare anofanirwa kushandisa zvinosvibisa mafuta epasi. Zvisinei, pombi iyi inoshandisa simba rinobva kuzuva uye yakachena chose.
Kana zviri zvebatsiro zvarinopa zvekudiridza, hazvifungidzike. Ingori pombi yemvura yezuva Iyo inokwanisa kupomba mvura inokwana kudiridza kudiridza mahekita gumi epasi.
Ndeipi pombi yandinoshandisa kana ndikadiridza zvirimwa zvemadiridziro?
Zvirimwa zvinodiridzwa zvinoda huwandu hwakawanda hwemvura kuti ikure uye iwedzere kugadzirwa. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti uzive mushe kuti ndeipi mhando yepombi inonyanya kubatsira mune yega kesi.
Kana zvirimwa zvedu zvadiridzwa zvikapfuudza zvinodiwa nemvura pamusoro pe4500 litita emvura pazuva, inokurudzirwa kwazvo kushandisa iyo inonyudza yezuva pombi yemvura. Pombi idzi dzine pombi yakakura kudarika yepombi, ichikwanisa kupomba kusvika pamarita e13500 emvura pazuva. Ichokwadi kuti aya mapombi anodhura kupfuura epasi, asi isu tichataura nezvemitengo gare gare.
Kune rimwe divi, kana izvo zvatinofanira kupomba zvisingapfuuri mazana mashanu emarita emvura pazuva, zviri nani kushandisa pombi yemvura yezuva. Mhando yepombi iyi inowanzoshandiswa mukudiridzira zvirimwa nenzvimbo diki nemagadheni asingade mvura yakawanda. Dzinoshandiswawo muzvipfuyo kudiridza mafuro.
Mitengo iri kuratidza chaizvo, kupihwa mapombi mazhinji aripo mumisika. Iyo inowedzera simba uye yepamusoro mhando, iyo inowedzera mutengo. Mitengo yemapombi emvura yezuva gumi nemaviri, ayo anonyanya kushandiswa kudiridza, anokwanisa kupomba marita matatu paminiti, Ivo vakatenderera makumi matatu euros.
Mitengo inosiyana zvakanyanya zvichienderana nehukuru, asi hazvireve kuti zvakaenzana. Unogona kuwana zvakakwana matanhatu litre mapombi paminiti ku70 euros.
Neruzivo urwu iwe uchanyatso kuziva chimwe chinhu pamusoro pemapombi emvura ezuva. Midziyo iyi inotibvumidza kuramba tichifambira mberi mukuzvimiririra kwemafuta kubvira ipapo, kazhinji, mapampu aya angangoda dhiziri kana peturu uye izvi zvinokanganisa mutengo mukutenga mafuta, kutsiva pamwe nekutakura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Solar pombi yemvura
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve simba rekuzvishandisa